TechadminLab - Technology Blog
Scripts amin'ny tranonkala
Ahoana no hamoahana ny efijery PC Windows 10 amin'ny Xbox One amin'ny alalan'ny Wireless Adapter App
Microsoft nanatsara ny app amin'ny Wireless Adapter amin'ny Xbox One. Ny mpisera Windows 10 na mpampiasa Android dia afaka manamboatra ny efitranony. Izany dia ahafahanao mampiasa ny Xbox One ho toy ny fanaraha-maso faharoa na milalao lalao Windows 10 ao amin'ny efijery TV. ...
Ny birao dia maka fotoana lavalava na eo amin'ny fifandraisana mangatsiaka
Indraindray rehefa manamboatra Office ao amin'ny ordinateranao Windows 10 ianao, dia afaka mandefa hafatra diso "Miala tsiny fa toa eo amin'ny fifandraisana mora miova ..." ianao. Azonao atao ny mitranga amin'ny versione iray an'ny Microsoft Office ahitana Office 2019, Office 2016, Office for Business, Office 365 Admin, Office ...
Ahoana no fomba hiarovana sy hiarovana ireo antontan-taratasy miaraka amin'ny LibreOffice
Ny fiarovana ny antontan-taratasy dia laharam-pahamehana hatrany raha toa ianao ka miasa amin'ny antontan-taratasy sarotra na antontan-taratasy elektronika. Ny ankamaroantsika dia mamorona antontan-taratasy mba hanangona hetsika manan-danja iray na rakitsoratra izay manome fampahalalana mahasoa mba tsy ho very. Orinasa goavambe no mampiasa tahirin-kevitra mba hitahirizana fahamatorana
Ahoana ny fandefasana hafatra amin'ny Windows 10 amin'ny Android Phone
Windows 10 sy Android dia lava be. Manolotra ny fampiharana amin'ny finday i Microsoft izay mamela ny olona hampifandray ny finday, ary avy eo miditra amin'ny data. Na izany aza, mila Microsoft Launcher na Cortana izy io. Mitondra fanamarihana, safidy hafatra sy mihoatra. Na izany aza, ...
Ahoana no hanajanonana ny Windows 7 endriny fampandrenesana
Windows 7 dia rafitra fiasa lehibe tokoa. Na dia efa nivoaka 3 taona aza ny famoahana Windows 10, dia nanome azy fifaninanana henjana momba ny tsena nividy izany. Fa ny zavatra tsara rehetra dia misy fiafarany. Ary amin'ny safidy tsara kokoa amin'ny Windows ...
Fomba ahoana no hamahana olana amin'ny famahana olana?
Ny vokatra rehetra avy amin'ny Microsoft dia mandalo amin'ny dingan'ny famandrihana. Raha ny ankamaroan'ny fotoana dia miasa, indraindray misy olana. Ao anatin'ity toro-lalana ity, mijery vahaolana mahazatra izahay amin'ny fisorohana ny fampiatoana ny birao. Mizara ny Office 365, Office 2019 ary Office 2016 izy io.
Ahoana ny fomba hamahana olana amin'ny fametrahana ny Office
Matetika ny rafitra Microsoft Office dia manitsy, fa dia rindrambaiko izany. Ao anatin'ity toro-lalana ity dia mijery olana vitsivitsy mahazatra isika, ary ny fomba fandrenesana mandritra ny fametrahana ny Office. Mijery ny olana manodidina ny Office 2013, Office 2016, Office 2019 ary Office isika.
Hamafiso ny Code Error 0x80072EE7 mandritra ny fametrahana Google Chrome na Update
Google Chrome indraindray dia fantatra amin'ny famafana ny code code 0xXUMXEXXEXXXX. Ity dia voalohany noho ny firewall Windows, na ny Firewall firewall hafa izay manakana ny fametrahana na famerenana ny famoahana. Saingy ny antony hafa tahaka ny kolikoly na tsy feno ny rindrambaiko maimaim-poana dia mety mahatonga izany koa ...
DoYourData Data Recovery dia rindran-drakitra mahery vaika sy rindrambaiko mahomby ho an'ny Windows
DoYourData Data Recovery dia rindrambaiko matihanina diso sy ordinatera ho an'ny Windows. Afaka ahitanao ny angon-drakitra tsy hita ao amin'ny solosainao ao amin'ny solosainao, toy ny USB, SSD ary flash. Ny ampahany tsara indrindra amin'ny rindrambaiko dia ny fampiasana tsotra. Any ...
iBeeSoft Data Recovery revize: Avereno ny data voafafa avy amin'ny Windows 10
Imbetsaka izahay no mamafa antontan-taratasy fotsiny vao mahatsapa fa mila azy ireo isika. Indraindray dia misy raki-peo misimisy ihany, fa ny tranga ratsy indrindra dia rehefa manamboatra ny fiara sarotra ianao na mamafa sombin-drakitra tsy mila miverimberina. Satria ny Windows dia tsy manolotra zavatra hafa afa-tsy ny fanodinana azy, ...
VidPaw Review: Free video downloader & tranonkala converter an'ny MP3
Ny famoahana lahatsary avy amin'ny YouTube sy tranonkala hafa dia somary bitika kely noho ny antony samihafa. Na tsy maintsy mametraka rindrambaiko ao amin'ny ordinateranao ianao na miankina amin'ny fanitarana tranokala buggy izay mamela anao haka ireo horonan-tsary. Saingy ny fitaovana na ny fitaovana ampiasaintsika ...
Ahoana ny fomba hamongorana ny Netflix any amin'ny faritra samihafa
Netflix dia iray amin'ireo tolotra maimaim-pivoarana tsara indrindra izay manome ny votoaty tsara indrindra amin'ny aterineto. Na izany aza, dia mametraka ny votoaty ho an'ny firenena maro i Netflix araka ny fifanarahana amin'ny mpamokatra. Ny rafitra Netflix dia manaraka ireo mpampiasa mifototra amin'ny IP, ka na dia misy kaonty any Etazonia aza ianao, ...
1 2 3 4 ... 1,569 Manaraka
Ahoana no hamoahana ny efijery PC Windows 10 amin'ny Xbox One amin'ny Wireless Adapter ...
Famakiana ny horonan-tsary 3 - Ny lalao efa nandrasana hatreto dia avy amin'ny limbo
Hira fialan-tsasatra hantsoina antsoina hoe 'Cataclysms'; Fitsipika PC sy UI Launch Updates Voafaritra
NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6 Graphics Card Review FT. MSI Armour X ...
AMD Radeon VII 7nm ny GPU dia mametraka ny làlany ho an'ireo mpandinika mpandinika
Ny Windows Windows 10H19 Build dia mampiakatra ny rindrambaiko Desktop ao amin'ny Windows miovaova
Hihazakazaka ny hipetrahan'ny PS4 Pro noho ny Xbox One X, XBOXX Checkerboarding ampiasaina amin'ny ...
Ny Windows 10 Updates Miverina indray ho an'ny mpampiasa sasany - Midira amin'ny DNS Google ho an'ny ...
Asus mamoaka ny Android Pie ho sidina Zenfone 5Z: Ity ny fomba fametrahana
FaceTime bug dia mamela ireo mpampiasa iPhone hanainga amin'ny resadresaka; Apple mbola handray andraikitra
Ny fikirakirana PUBG update #25 dia miaina ao amin'ny server server: Bizon SMG, Canted Sight, Vikendi ...
WhatsApp ho an'ny tranonkala dia mahazo ny safidy sary amin'ny sary: ​​Ity ny fomba hanombohana
Ny Samsung Galaxy M10, ny vidin'ny M20, ny tahirin-tahiry tahirin-tsakafo nipoitra alohan'ny fanombohana
Mpampiasa iray ao OnePlus mitaraina ny tsy fahombiazan'ny battera haingana: misy vahaolana hamahana ...
WhatsApp, Instagram, Integration Facebook Messenger: Inona no dikan'ny hoe mpampiasa?
Ny mozika zombies an'ny PUBG Mobile dia mampatahotra, mampatahotra ary mipoitra tsara indrindra: Review